သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်(လင်း)က email မှတဆင့် နားထောင်ကြည့်လိုက်နော်ဆိုပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို swf format နဲ့ပို့လိုက်တယ်။ နားထောင်ကြည့်တော့ စာသားရော တီးလုံးလေးတွေရော အရမ်းကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် စန္ဒရားတီးလုံးလေးတွေ နားထောင်ရတာ တစ်မျိုးပဲ။ ဘာကို ခံစားမိမှန်း မသိအောင်ပါပဲ။ သီချင်းက Fiona Fung ရဲ့ Proud of You ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ MP3 Format ကိုလိုက်ရှာပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ahmeisoekyi 12:59 am
uhh huh..now u can feel english song :)) Good to hear, fri!
Yeah shouldn't limit ur music boundary.
s_potato 10:46 am
CMS 3:19 pm
ahmei: it's once inablue moon :D
s_potato: လိုချင်ဝယ်ထား ကြိုက်ရင်ဆောင်ထား :)
BarNyar 6:35 am
ကွိကွိ.. ဒီသီချင်းကို နားထောင်ချင်လို့ ဂူဂယ်မှာရှာလိုက်တာ ကိုဖိုးချမ်းရဲ့ ဘလောက်နဲ့တမ်းတိုးတာပဲ ဟတ်ဟတ်
CMS 6:52 am
ဟိဟိ .. version4မျိုးလုံးရှိတယ် ကြိုက်တဲ့ version သာ ယူသွားပေတော့ဗျာ :)